Izifundo ze-10 ezibulalayo ekuhlolweni kwesofthiwe zenza ube ngumholo
Ukuhlola izinhlelo zokusebenza zesimanje / isofthiwe, njengezinhlelo zokusebenza ze-composite / hybrid, i-computing yamafu, namapulatifomu eselula azisa izinselele kumaqembu asebenzayo wokuhlolwa kwesofthiwe yanamuhla, amaningi awo awahlomele amathuluzi afanele nolwazi lokubhekana nezinselelo. I-innovative Technology Solutuions inikeza isisombululo esibanzi sokuhlolwa kweSofthiwe yokuQeqesha nokuQinisekisa ukusiza ukuletha izinhlelo zekhwalithi nokusheshisa kwebhizinisi lakho.
I-HP VuGen v11.5
I-HP QTP UFT 11.5x iyadingeka
I-HP Load Runner (LR)
I-HP Data Protector
Izifundo ze-10 ezibulalayo ekuhlolweni kwesofthiwe nokuqinisekiswa
I-1. Ukuqeqeshwa kwe-Selenium
Abalaleli Ababhekele Selenium
I-2. Ukuqeqeshwa kwe-Software
Imigomo Yokuhlola Isoftware
Izilaleli ezibhekele ukuhlolwa kweSoftware
I-3. I-HP VuGen v11.5
Imigomo ye-HP VuGen v11.5
Izilaleli ezibhekele i-HP VuGen v11.5
I-4. I-HP Trim Training
Izilaleli ezibhekele ukuqeqeshwa kwe-HP Trim
Izidingo ze-HP Trim Training
I-5. I-HP Tipping Point
Imigomo ye-HP Tipping Point
Izilaleli ezibhekele i-HP Tipping Point
Izidingo ze-HP Tipping Point
I-6. I-HP QTP UFT 11.5x ebalulekile Ukuqeqeshwa
Izinhloso ze-UFT Training
Izilaleli ezibhekele ukuqeqeshwa kwe-UFT
Izidingo ze-UFT Training
I-7. Layisha ukuqeqeshwa kwe-Runner v11.5
Izinhloso ze-Stack Runner Training V11.5
Izilaleli ezibhekele ukuqeqeshwa kwe-Stack Runner V11.5
I-8. Umvikeli wedatha
Imigomo Yomvikeli Wokwaziswa
Izilaleli ezibhekele uMvikeli woLwazi
Isidingo soMvikeli woLwazi
I-9. Isicelo sokuqeqeshwa kwe-Lifecycle Management
Imigomo Yomsebenzi Wokuqeqesha Ukuphila Kwempilo
Izilaleli ezibhekele ukuqeqeshwa kwe-Lifecycle Management Training
I-10. Ukuhlola Isofthiwe - Ukuzenzekelayo
Ukuhlola Isofthiwe - Uhlelo Lokuzenzekelayo lunikeza:
Ihlanganiswe ndawonye Ukuhlolwa kokusebenza (UFT / QTP):
I-Virtual User Generator (VuGen):
I-Stack Runner (LR):
Isicelo se-Lifecycle Management (ALM):
Izilaleli ezibhekele ukuhlolwa kweSoftware - Ukuzenzekelayo
I-Selenium iyinhlangano evulekile-engumthombo ovulekile futhi ehambisana nokusetshenziswa okusetshenziselwa ukuhlolwa okuzenzakalelayo (izicelo zewebhu). Igunyazwe ngaphansi kwe-Apache License 2.0. I-Selenium iyinhlangano yamadivayisi esiza ekusebenziseni izinhlelo zokusebenza zewebhu kuphela. Lo msebenzi wokufundisa uzokunikeza ukuqonda okuphezulu kuya phansi kweSelenium kanye namadivaysi ayo ahlobene nokusetshenziswa kwawo.Iyakwazi ukusebenzisana nokuhlelwa kwezinhlaka nezinhlelo ezahlukene zokusebenza. I-Selenium akuyona nje kuphela idivaysi yedwa kodwa isilungiselelo sezinsiza ezisiza abahlaziyi be-analyzer ukuba bafake izicelo ze-elektroniki ngokuphumelelayo nangokuqondile.
I-Selenium wuhlaka lokuhlola uhlelo lokucubungula lwezinhlelo zokusebenza zewebhu. Lesi isigaba sokufundisa esiphelele sokuhlolwa okuhlelekile kufaka phakathi Isingeniso sokuhlolwa okuzenzekelayo, Isingeniso ku-IDE yeSelenium nokufakwa kwayo, imibono ye-Selenium IDE, i-Selenium RC, i-TestNG, Imisebenzi Yezokushayela Yewebhu, uHlelo Lohlaka kanye ne-Selenium Grid nokunye.
I-Selenium iyidivayisi evulekile-umthombo.
selenium Ungafinyelelwa ekuthuthukiseni okuhlukile okuvezile i-DOM.
Unamandla okwenza izikripthi ezithintekayo phezu kwezinhlelo ezihlukahlukene.
Kungenza izikripthi ezakhiweni ezahlukene zokusebenza.
I-Selenium iqinisa amafoni omakhalekhukhwini.
Ukwenza ukuhlolwa ngaphakathi kohlelo, ngakho-ke isikhungo asidingekile ngenkathi ukusebenza kweskripthi kusengaphambili.
Kungenza ukuhlolwa ngokufana nokusetshenziswa kwe-Selenium Grids.
Lokhu kuvivinya okufundiswa kuhloswe kochwepheshe bokuhlola izinhlelo abangafuna ukuthatha izinto ezibalulekile zeSelenium ngokusebenzisa imifanekiso esebenzayo. Ukuvivinya umzimba kuqukethe ukulungiswa okwanele ukukukhipha ngeSelenium kusuka lapho ungayithatha khona emakhulwini amaningi amakhulu.
Ngaphambi kokuqhubeka nalolu hlelo lokusebenza lokufundisa, kufanele ube nokuqonda okubalulekile kweJava noma yimuphi omunye umbuzo ohleliwe ukuhlela ulimi. Ngokufanayo, kufanele ube nolwazi ngezinto ezibalulekile zokuhlola imibono.
Leli klasi ligxila kumantongomane kanye nasezinkolweni ze-Software Testing ezokusiza ukuba ufunde ngezinga lokuhlola, amamodeli, nezindlela ukuze usebenze embonini yokuhlola software.
Lezi zifundo zixhomeke ezimweni ezihlala njalo, okuwusizo ukuqonda imibono yokuhlola, i-SDLC, i-STLC, ukuhlolwa komuntu kanye nezindikimba ezahlukene ezibalulekile ukusebenza nokuhlola okuzenzekelayo. Lezifundo zigxile ekuqapheliseni izidingo zokusetshenziswa, ngokunquma amazinga ahlukene okuhlolwa, emva kokuthi amakhasimende azohamba ngezinhlobonhlobo zokuhlola ukuhlola izimfanelo zokusebenza eziwusizo nezingafaneleki, futhi uzothola ukuhlolwa okulungeleyo nezimo zokuvivinya ukuhlola isicelo nge-angle ngayinye , ekugcineni uzongena ukungahambisani nokukhiqiza imininingwane yokuhlinzekwa ngokuqondiswa kokuhlolwa kokuhlolwa.
Qaphela ama-rudiments kanye nezincazelo zokuhlolwa kwesofthiwe nezindinganiso zayo
Ukuhlukanisa izinhlobo ze-SDLC ezihlukile
Izinqubo zokuhlola ezifanayo zokugcwalisa izidingo zebhizinisi
Ukuhlukanisa isibambo sokuhlolwa sokuhlolwa
Ukuphathwa kobungozi bokuziphatha futhi ubone ukuthi kusebenza kanjani ekuhlolweni kwesofthiwe
Ukusebenzisa ukubika kanye nezinkomba zokuqalisa ukhiye ukulinganisa impumelelo
Ukuhlukanisa izinhlobo zokuhlola ezingekho ezingokoqobo
Ukuhlukanisa imibono yokuhlolwa eqhutshwayo
Noma yiliphi iklayenti eliphuthumayo elidinga ukuqala umsebenzi ekuhlolweni kwesofthiwe
Ulwazi lokusebenza of
Ukuhlolwa kokubulawa kudinga ukufana. ukuzikhandla ku-SUT ukubeka i-stack, okuyinto ehlupha kakhulu noma umuntu angasondela eduze kwe-30% -40% yempikiswano yokubulawa ngemisebenzi yomsebenzi. Ukushaya lolu hlobo lwezimo futhi uthole nganoma yisiphi isilinganiso se-90% -95% yomphumela wokuhlola, i-analyzer yokusebenzisa isebenzise i-VuGen ukwenza izikripthi ze-Vuser.
I-Vugen ibhala ukubambisana phakathi kweKlayenti / Iseva (ukushintshanisana), ukubamba ulwazi lokuthumela nokwamukela. Isebenzisa umhumushi weC dialect ukurekhoda inqubo ye-SUT, okwenza iskripthi se-C. Ekuqaleni kuqala ngemisebenzi yokurekhoda ukuveza ukuziphatha kanye nomsebenzi wamaklayenti abonakalayo abasebenza ku-C / S ubunjiniyela.
Ngemuva kokuthi iskripthi esiyisisekelo sichazwe, khona-ke sishintsha ekuthuthukiseni iskripthi ngokuthi i-Parameterize (Vimbela imininingwane yokucima idatha) futhi yenza ukuqinisekiswa kugxile (Kuhlola impendulo yeseva). Lokhu kuzofaka ukuqondisisa nokuguquguquka kwiskripthi. Le nkambo yeVugen ihlose ukunikeza izandla-ngolwazi lokusebenza lokuhlola ukuziphatha kokusetshenziswa ngaphansi komthwalo oqinekayo usebenzisa amakhemikhali amadivaysi.
Ukufunda okuyisisekelo okuyisibopho sokuhlola ukulayisha
Yazi izingxenye ze-LoadRunner (LR)
Faka isicelo senqubo emisiwe yokwenza umsebenzi we-LR obalulekile
Qopha izikripthi kwimvelo yewebhu usebenzisa i-Virtual User Generator (VuGen)
Hlela izinyathelo namafomu ebhizinisi usebenzisa ukuhwebelana
Phatha izikripthi ukuze uhlukanise ulwazi lokufakelwa kwamakhasimende
Qondanisa izikripthi ukucubungula ulwazi olwenzelwe iseva
Ukusebenza no-Rendezvous ukukhiqiza umthamo omkhulu emgqeni othile
Engine Engineer Insurance and Engineers Engineer.
Kumaklayenti amasha adinga ukwakha izikripthi ukuhlola uhlelo lwewebhu.
Abasebenzi abasebenzisa inqubo yokuhlola umthwalo.
Amasayithi nezilungiselelo zohlelo.
Izilimi zohlelo lwe-C.
Umbono wobuchwepheshe beKlayenti / Seva.
I-Hp Trim nayo ibizwa ngokuthi i-Record Manager. Le nkambo ye-HP Trim ihloselwe ukusiza abaqondisi ukuba bahlele, bahlele futhi baqhubeke nezinqubo zomsebenzi ku-HP Records Manager. Amalungu azokwenza inqubo yomsebenzi ehambelana nabangane bawo.
Ihlanganiswa kodwa ayinqatshelwe, amarekhodi amarekhodi, ukulawula amaklayenti, abasebenzi bezisebenzi eziphezulu kanye nozakwethu abangaphezu kwamanye amazwe
Ukuphela komphumela wokuphela komsebenzisi wokulungiselela noma ukulinganisela kwezinyanga ezingu-6 noma konke okusebenzisa i-HP TRIM noma i-HP Records Manager ku-domain expert.
Ukufunda amazinga okuphatha amarekhodi kanye namafomu ebhizinisi langaphakathi.
Lezi zindlela kulokho kubonisa imibono nemikhuba emihle ebalulekile ekufakeni, ilungiselelo, inhlangano yokuhlela kanye nokuphathwa kokuphepha kwe-Tipping Point ilungiselelo. Ngamakheli ahlakaniphile nezandla ekuzivocavoca, amalungu azobona indlela yokwenza uhlelo lwe-Intrusion Prevention System (IPS) ne-Security Management System (SMS).
Ngemva kokuqeda le nkambo ye-HP, kufanele ube namandla okukwenza lokhu okulandelayo:
Qondisisa imibono yokuphepha eyinhloko
Ukusetha ukusethwa kwe-Intrusion System Prevention and design
Qondanisa ukusetha nokuhlelwa kweSistimu yokuPhepha kokuPhepha
Dlulisa umklamo nezimo
Qaphela izinqubo ezamukelekayo ezigunyaziwe
Hlela onjiniyela, uhlele ochwepheshe, uhlele abaphathi, ababonisi bezokuphepha, abaqondisi bohlaka, abakhiqizi bezinhlaka, bahlele amasu okuphepha nokuhlela abakhiqizi.
Iseva epulazi ehlela ukusebenza kanye nokuphatha kuqhuba
Ukufunda ngokujwayelekile kwamadivayisi nokuphathwa kokuphepha
Ukubandakanyeka nge-Network Security kuvuselela
Le nkambo igxila ezintweni ezisemqoka zoHlelo Lokusebenza Oluhlanganisiwe oluzokusiza ukuba ufike enkundleni yokuhlola isofthiwe ngenzuzo yokusebenzisa i-robhotization instrument. Ngaphambi kwazo zonke ezinye izifundo zizoqala ngerekhodi nokudlala isikhathi, amalungu azofunda amakhono wokwenza izikripthi ezintsha, ushintshe izikripthi ukuze kuthuthukiswe ukuhlolwa. Ekuthuthukiseni, okuzofaka ukuqondisisa nokuguquguquka kwiskripthi, kufaka phakathi ukuvumelanisa, izinketho zokuhlola, kanye nokuhlelwa kwemisebenzi.
Kamuva esikoleni, amalungu alamukela izindinganiso ezithathwe ngabathuthukisi njengoba bechaza izikripthi zokuhlola eziphambili. Ukwandisa ukuvuselelwa kuzokwenza imisebenzi evuselelekayo, imilabhu yomsebenzi, kanye nezitolo zombuzo ezabiwe, amalungu azohlonywa ngendlela efanele yokuhlola cishe noma yikuphi uhlobo lokusetshenziswa.
Yenza iskripthi sokuhlola imishini eyisisekelo ngokusebenzisa ukuhlolwa kwebhuku
Ukuthuthukisa ukuhlolwa okubalulekile usebenzisa ukuvumelanisa ngenkathi urekhoda futhi ngemva kokurekhoda
Ukwenza iskripthi sohlelo lwekhompiyutha okunamandla okusebenzisa imingcele
Ukwenza imisebenzi evuselelekayo nokuyishintsha ukuze script ngcono ngaphezulu
Ukusebenzisa i-Object Repository
Ukuthatha ukudubula ku-Object Identification nokuguqula ukuhlukanisa ukucaciswa kobufakazi bezinto
Ukusebenza izakhiwo ze-Object ukuze zenze kube nzima kakhulu
Ukusebenza ngezindlela ezehlukene ze-UFT
Ukwenza i-checkpoint yangokwezifiso ukuqinisekisa uhlelo lokusebenza ngephuzu lokubuka kwamakhasimende
Iqalisa i-AUT ne-UFT ngokusebenzisa ukuvumelanisa nezinxenye ezihlukile ze-UFT
Kudlula ukufaka okuhlukile kwamaklayenti usebenzisa ipharamitha
Ukubeka imininingwane yesikhathi se-replay esikhathini esingasetshenziselwa ukusebenza
Ukusebenza ne-rundown yokuhlola
Kumaklayenti amasha adinga ukuguqulwa kusukela ekuhlolweni kokuhamba komuntu kuya ekubanjweni kwe-robotization esebenzisa i-UFT
I-Engine Assurance Engineer efuna ukukhombisa isimo seThimba eliholayo ngokusebenzisa i-UFT
Ulwazi lokusebenza nge:
Amasayithi nezilungiselelo zohlelo
I-Discretionary Experience nge:
Ukwenza ukuhlolwa okungekho okusebenzayo njengohlolo lokusebenza, abahlaziyi bokusebenza babasebenzisa izinsimbi zokusebenza njengeLowRunner. Isetshenziselwa ukhiqiza umthwalo oqondile phezu kweseva ukuhlola ukukhishwa kwe-SUT (Iseva ngaphansi kokuhlolwa). I-LoadRunner isofthiwe yesofthiwe inezinsimbi ezintathu ze-software:
I-Virtual User Generator (i-VuGen)
I-Stack Runner inika amandla i-analyzer yokukhipha ukwenza i-Vusers (Abasebenzisi abasebenzisa i-Virtual) ukubeka umthwalo ojulile kuma-server mayelana nezindlela ezihlukahlukene zokuhlola ukubulawa njengokulayishwa ukulayisha, ukuhlolwa kokucindezeleka, ukuhlolwa kokukhuthazela, ukuhlolwa kwe-Volume nokunye okunye.
Ulwazi oluyisisekelo oludingekayo ukuhlolwa kokulayisha
Sebenzisa amaskripthi adalwe usebenzisa i-VuGen, uhlele izilungiselelo zesikhathi sokugijima, usebenze nezikrini zokwenza, uqalise inani le-Generator Load (LGs), nokwandisa inombolo yomsebenzisi we-Virtual (Vusers) esimweni se-LR ngaphandle kwezinhloso zokuhlola umthwalo
Dlala ukuhlolwa kwe-heap kwesicelo sakho ngokusebenzisa isimo
Ukusebenza ngamashadi kanye nohlaka olusetshenziswa Ukuhlaziywa
Isikhundla esiphathelene nenqubo yokuhlola umthwalo.
Lelifundo linikeza ulwazi oluyisisekelo ukunika ababonisi abagciniwe ukuba bahlele futhi bahlole isofthiwe ye-HP Data Protector. Izindlela zokusebenza ngezandla zelabhu ziqinisa izikhathi ze-hypothesis ukuze ziqinisekise ukuqonda okujulile kwemibono yokuqinisa nokuvuselela, ukusiza kwesofthiwe nesicelo sayo sokusebenzisa ukubulawa kwamatshe okugaya.
Yethula futhi usakaze isofthiwe ye-HP Data Protector endaweni yakho noma udlale ukukhokha kusuka ekuhumusheni kwe-HP Data Protector eyedlule.
Hlela into ye-software ye-HP Data Protector.
Hlela izimpendulo zakho ze-Tape ne-Disk ezisuselwa ku-Disk ukuze usebenzise ne-software ye-HP Data Protector.
Sebenzisa into yesofthiwe ye-HP Data Protector ukuqinisa, ukuvuselela kabusha, neskrini kusukela ku-GUI nokulayisha umugqa.
Yenza isofthiwe ye-HP Data Protector
Amandla kanye nohlaka lwabaqondisi ngokusebenzisa i-HP Data Protector software.
Uhlaka kanye Nokuphathwa Kwenethiwekhi noma isipiliyoni esifanayo.
Ukuze uthole izinto ezibalulekile kanye nezidingo zokufeza noma yikuphi ukuqinisekiswa okuhlobene, bheka isichazamazwi sokuqinisekisa ku-HP ExpertOne isayithi.
Le nkambo ye-ALM igxila emantongweni nasezinkolweni ze-Application Lifecycle Management ezokusiza ukuba uphathe isiphetho sempilo yokusetshenziswa nokuthuthukiswa kwesigaba. Okokuqala futhi okuphambili inkambo izoqala ukuxoshwa ekuqalisweni kokuphatha kwe-Application Lifecycle Management evumela ukuthi iklayenti ukuthi yenze futhi iqondise izinkampani kanye namakhasimende kanye namalungelo amaklayenti. Ngemuva kokuba umphathi wengxenye yomqondisi uzobona uhlelo lokuphila lwe-application kusuka ku-Ukukhishwa ukuze kuhlukaniswe isikhathi sesikhathi sempilo yokuqeda, Isidingo sokuveza ukusebenziseka kokusebenza, Uhlelo Lokuhlola luzosiza ukuhlela inqubo yokuhlola nesimo, uLabhu Wokuhlola luzovumela amaklayenti ukuba enze ukuhlolwa alindele isicelo, I-module ephelele ekwenzeni nasekuhloleni ukungapheleli kanye neDashibhodi ukubona okuzokwazi ukukhiqiza imibiko namashadi ukuhlolwa okungcono kokusetshenziswa.
Isiqu Isicelo sokuPhepha kweMpilo (ALM)
Qondanisa umehluko phakathi kokuxhumana kwe-ALM
Yenza ukukhishwa, imijikelezo futhi uthuthukise izidingo
Hlola izingozi ezihlobene nezinto ezidingekayo
Hlela izivivinyo nezihloko ekuhloleni uhlela umuthi
Phakamisa futhi wenze ukuhlolwa kuhlela
Dala izikripthi zokuhlola kusuka ezinyathelweni zokucushwa
Yenza isethi yokuhlola, Yenza ukuhlola okubhaliwe kanye nokwenziwe nge-robotized
Ukurekhoda nokulandelela ukuhlolwa kokuhlolwa kuza
Ngena futhi uqondise
Yakha amashadi nemibiko esebenzisa ideshibhodi
Abanjiniyela bokuqinisekiswa kwekhwalithi
I-Quality Center / Abaphathi be-ALM
Amanye amaklayenti wekhwalithi / ama-ALM aphethe ukuphatha imisebenzi, amaklayenti kanye nokwenziwa komsebenzi wokwenza ngezifiso
Uhlelo luqale nge-HP, okuthiwa njenge-HP-SU (Software University). I-70% yokuhlolwa kwesofthiwe emakethe isuqedile ngosizo lwe-HP echazwe ngamathuluzi okuzenzekelayo. Loluhlelo oluhlelekile kakhulu embonini luhlele izibonelo futhi lunalo lonke imibono kanye nezilungiselelo ezibalulekile endaweni yokuhlola software. Igxila ekuhlolweni kwe-Manual kanye nokuzenzekelayo kwe-GUI nezinhlelo zokusebenza ezisuselwe ku-API, kanye nezinsiza zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu ze-HP.
Ngabe iziphi izinkinga ezizokwazi ukuqonda imibono eyisisekelo yokuhlola uhlelo lokusebenza nge-SDLC yokuqonda (Software Development Lifecycle) bese idutshulwa ku-STLC (Software Testing Lifecycle). Lolu hlelo lubonisa izinhlobo ezahlukene ze-SDLC kanye namazinga okuhlola, izinhlobo zokuhlola ezihlukile, Indlela yokuthola izinto ezidingekayo ezivela kumakhasimende nokuthi yi-QA? Ngaphezu kwalokho, iyiphi ingxenye yayo? Yonke leso sikhathi. Ukwengeza kugxila ekuhloleni kweHovisi emisebenzini eqhubekayo kanye nesikhashana ngemuva kokwenza izinqolobane eziyisisekelo (Uhlelo lokuhlola, Case Test and RTM). Ukwenziwa kokuhlolwa kwenziwa ukuze uthole imiphumela futhi uhlole ukuthi sithole umphumela ojwayelekile noma cha. Ngokufanayo sizokhuluma ngezinhlobo zokuhlola (Manual and Automation) futhi senze ama-KPI (IziKhombisi Zemisebenzi Eyinhloko) yoQinisekiso lweQiniso.
Kuyinto yensimbi yokukhiqiza eyenziwe i-HP ukuhlola ukusiza kwe-GUI noma izinhlelo zokusebenza ezisuselwa ku-API. Njengoba kungumshini wokusebenzisa amashini, kwenza ama-VB scripts ukuthi ahlole. Ukuzithoba kuzothola izikhono zokwenza izikripthi ezisha, lungisa ama-scripts ukuze uthuthukise ukuhlolwa. Ekuthuthukiseni, okuzobandakanya ukuqondisisa nokuvumelanisa kwiskripthi, kufaka phakathi ukuvumelanisa, izinketho zokuhlola, kanye nokuhlelwa kwemisebenzi.
Kamuva esikoleni, amalungu athola izindinganiso isikhathi esiningi esithathwe ngabathuthukisi njengoba behlela amaskripthi aphezulu okuhlolwa. Ukwandisa ukubuyisela kabusha kuzokwenza imisebenzi evuselelekayo, amashabhulali womsebenzi, kanye nezindawo zokugcina zokubhikisha, amalungu azohlinzekwa ngesethi yobuchwepheshe edingekayo yokuhlola mayelana nesicelo.
Ukuhlolwa kokubulawa kudinga ukufana. ukuzama ukuqondisa i-AUT ukubeka i-stack, okuyinto enzima kakhulu noma umuntu angasondela eduze kwe-30% -40% yempikiswano yokubulawa ngemisebenzi yomsebenzi. Ukuze ushaye lolu hlobo lwezimo futhi ungene kunoma yisiphi isenzakalo se-90% -95% somphumela wokuhlolwa, umhlaziyi wokusebenzisa usebenzise i-VuGen ukwenza izikripthi ze-Vuser. U-Vugen urekhoda ukusebenzisana phakathi kweKlayenti / Iseva (ukushintshanisana), ukubamba ulwazi lokuthumela nokwamukela. Isebenzisa umhumushi weC dialect ukurekhoda inqubo ye-SUT, okwenza iskripthi se-C. Ekuqaleni kuqala ngemisebenzi yokurekhoda ukuveza ukuziphatha nomsebenzi wamakhasimende asebenzayo abasebenza kuC / S design.
Ngemuva kokuthi iskriphthi esibalulekile sakhiwe, khona-ke sishintsha ekuthuthukiseni iskripthi ngokuthi i-Parameterize (Vimbela imininingwane ye-Caching) futhi yenza ukuqinisekiswa kugxile (Kuhlola impendulo ye-Server). Lokhu kuzokufaka ulwazi nokuzivumelanisa nokubhala kwiskripthi. Le nkambo yeVugen ihloselwe ukunikeza izandla-ngolwazi lokusebenza lokuhlola ukuziphatha kokusetshenziswa ngaphansi komthwalo oqinekayo usebenzisa idivaysi yokusebenza.
Ukwenza ukuhlolwa okungekho okusebenzayo njengohlolo lokusebenza, abahlaziyi bokubulawa babasebenzisa amadivaysi okusebenza njenge LoadRunner. Isetshenziselwa ukhiqiza umthwalo oqondile phezu kweseva ukuhlola ukukhishwa kwe-SUT (Iseva ngaphansi kokuhlolwa).
I-LoadRunner isofthiwe yesofthiwe inezinhlelo ezintathu ze-software:
I-Stack Runner inika amandla i-analyzer yokukhipha ukwenza i-Vusers (Abasebenzisi be-Virtual) ukubeka umthwalo ojulile kuma-server njengenqubo yokuhlola yokuhlola efana nokuhlola ukulayisha, ukuhlolwa kokucindezeleka, ukuhlolwa kokukhuthazela, ukuhlolwa kwe-Volume nokunye okunye.
Kugxila emantongweni nasezinkolweni ze-Application Lifecycle Management ezokusiza ukuba uphathe isiphetho sempilo yokusetshenziswa nokuthuthukiswa kwesigaba. Ekuqaleni inkambo izoqala ukuxoshwa kuNgxenye Yokuphatha ye-Application Lifecycle Management evumela ukuthi iklayenti ukuthi yenze futhi iqondise imisebenzi kanye namakhasimende kanye namalungelo amaklayenti. Ngemuva kokuba umphathi wengxenye yomqondisi uzobona uhlelo lokuphila lwe-application kusuka ku-Ukukhishwa ukuze kuhlukaniswe isikhathi sesikhathi sempilo yokuqeda, Isidingo sokuveza ukusebenziseka kokusebenza, Uhlelo Lokuhlola luzosiza ukuhlela inqubo yokuhlola nesimo, uLabhu Wokuhlola luzovumela amaklayenti ukuba enze ukuhlolwa alindele isicelo, I-module ephelele ekwenzeni nasekuhloleni ukukhubazeka kanye neDashibhodi bheka ukuthi yini ezocabangela ukukhiqiza imibiko nemidwebo yokuhlolwa okungcono kokusetshenziswa.
Noma yikuphi ukuphothula iziqu kudlulile ngaphansi
Ukufunda nge-SDLC noma i-STLC
Umbhalo we-Manual / Automation
Ulwazi lwe-MS Office noma isofthiwe ephawulekayo
Ukuqonda amafomu software software
Imiqondo yokuhlola - I-ALM
Ama-Liberaries we-PHP Mailer Ubulala iwebhusayithi njalo ngomzuzu ongayifunde lesi sihloko
Kungani I-Tableau? Isofthiwe engcono kakhulu yokuboniswa kwedatha